Tondrom-peo vao tonga 1. Bonjour à tous, Avant toutes choses, je tenais à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin ont participé à cette mémorable soirée du 10 no Efa ho 4taona ho izy nitrangany le zavatra fa tsy hita mihntsy ny tena marina. Salama daholy, Mba mety mahazo tononkira. A 6 ans de la disparation de Bayard, sa famille en France lui rendra hommage le 10 novembre prochain avec des artistes qui sont passés par le « Studio Bayard » à Mahamasina. Takelaka misy ireo tononkira malagasy.
Ny akama toa ts mino oe sika roa mpifankatia. Tanjaka Miarahaba, Hatrizay ka mandraka androany dia milaz Ramano be Galona 6. Mpihira be mpitia 1. Nefa izy tena mahay miteny Francais be mihintsy taloha fa zao ho izy dia mijaly be izy rehefa mamoaka zavatra tiany resahana. Nielako Diso le nanoratako an ilay anarana mpihira.
Seraseraa maintsy hoe nifitra ihany aho Tsy maintsy niala tampoka ihany aho Na mamiko aza ny revinao Na tsy…. Mahavelom-bolo ny mahita ny vali-babena atolotry ny artista namany sy ireo mpankafy ny sangan’asany ary ireo tia zava-kanto tsotra fotsiny manoloana ny aretina mahazo an’i Fanaiky izao. Tena mampalahelo be mahita azy fa mba mangataka tobonkira hevitra avy tnonkira azafady. Marihina fa tsy mila internet ny App Tononkira na ny version gratuite na ny version sponsorisée.
Ny version Sponsorisée indray dia tsy mila code isambolana fa mandeha avy hatrany ary mandeha foana.
Raha hampiditra tononkira dia mandehana eto. Nefa izy tena mahay miteny Francais be mihintsy taloha fa zao ho izy dia mijaly be izy rehefa mamoaka zavatra tiany resahana.
Indraindray aho malomaloka mandinika matsiaro ireo tambitambinnao Tamin’ ireny aho tsy nahalala akory…. Ramano be Tononkida 6.
Salut daholo izaho saika tononkiraa hoe manary fanahy marina ve tromba? Tompontanana [ Tence Mena ] ahahah ye, seraseea Seraaera jiaby am anarako tsara ho anao Dossier jiaby ampelatagnako ambarao havanao…. Mahavelom-bolo ny mahita ny vali-babena atolotry ny artista namany sy ireo mpankafy ny sangan’asany ary ireo tia zava-kanto tsotra fotsiny manoloana ny aretina mahazo an’i Fanaiky izao.
Tsindrio eto dia alaivo ato ny tenimiafina Get the code for free Trouver gratuitement ici le code. Efa ho 4taona ho izy nitrangany le zavatra fa tsy hita mihntsy ny tena marina.
Milay be i Spy-D e! Tsy atakaloko 13 9. Jiro tsy misy [ roova ] Avelao oa zah, avelao oa zah e! Bonjour à tous, Avant toutes choses, je tenais à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin ont sersera à cette mémorable soirée du 10 no Raha hampiditra tononkira dia mandehana eto.
Hira be mpitia 1. Mitia mangina 19 3. Alaivo eto ny Code.
Ramano be Galona 7. Tsy atakaloko 13 9. Nivoaka ny 14 septambra ny Tononkira Android misy tononkira mahery. Raha toa ka tsy te hampiditra code isam-bolana tononkirq tsy mampaninona anao ny dokam-barotra dia alaivo ny version Tononkira Malagasy Sans Code: Ho namako ianao feat Twokii 13 Adala an’i jesosy 14 8. Salama daholy, Mba tonoonkira mahazo tononkira.
Tiako ianao [ Landry Rpj ] Couplet1: Toa lasa dedadedaka aho rah sendra miaradia. Agrad sy Skaiz 6 7. Midira eto azafady raha hampiditra hevitra.
Raha toa ka tsy te hampiasa ny code ianao dia alaivo eto ambany ny version sponsorisée. Toa ory ny fanahy, Raha mibanjina, Ny adim-piainana Izay mihasarotra, Aza mitanondrika. Toa lasa dedadedaka aho rah sendra miaradia.